Collectif Tany : “Tsy azo antoka ny fambolena indostrialy” | NewsMada
Collectif Tany : “Tsy azo antoka ny fambolena indostrialy”
Par Taratra sur 14/06/2017
Araka ny fanambaran’ny fikambanana Collectif Tany, mampanonofy ny tetikasan’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany hametraka ny Faritra ho fampiasam-bola amin’ny fambolena (ZIA), satria lazaina fa hatao sompitry ny ranomasimbe Indianina i Madagasikara. Roa ny tanjon’ireo mpamolavola ity tetikasa ity, ny fahavitan-tena amin’ny sakafo sy hahita lalam-barotra any ivelany. Efa nametraka ny ahiahiny matetika ny Collectif Tany amin’ity tetikasa zary nofy ity. Araka ny fahitan’ity fikambanana ity azy, mihevitra ny hitondra fitomboana 6% amin’ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ny ZIA. Hihena hatrany amin’ny 82% hatrany amin’ny 20% koa ny tahan’ny fahantrana hatramin’ny taona 2025. Milaza fa hifantoka amin’ny fambolena indostrialy koa ny ZIA. Hatreto anefa, tsy misy dingana mazava mihitsy entin’ity tetikasa ity hampihenana ny fahantrana haingana toy io ato anatin’ny 10 taona latsaka.
Niova fambolena ny mpampiasa vola
Ho an’ny Collectif Tany, tsy azo antoka ireo fanamby ireo, ary tsy manome toky ny hanatrarana ireo tanjona ireo ny orinasa vaventy mpampiasa vola vahiny. Efa nisy orinasa nomen’ny fanjakana tany anarivony hekitara, saingy niato taty aoriana. Toy ny orinasa vahiny iray niasa ampolo taony tany Ihorombe, namboly zavamaniry tanantanampotsy (jatropha), hamokarana angovo nefa tsy nahomby ny asa, ka nivadika mamboly zavamaniry hakana ilomenaka taty aoriana. Noroahina anefa ireo Malagasy mpiompy manao kijana ny toerana.
Santionany ihany io, fa ohatra faharoa tanisan’ny Collectif Tany koa ny fisintahan’ny mpampiasa vola sasany tany amin’ny ZIA Vakinankaratra, satria tsy milamina ny fitompoana ny tany, na mivarotra na “mody mampanofa” mora aza ny fanjakana.
Noho ny Covid-19: tsy afaka miverina miasa ny orinasa Ambatovy 24/10/2020
Lomano-Analamanga : fantatra, anio, ny datin’ny fifidianana 24/10/2020
Kitra maneran-tany : Feno 80 taona i Le Roi Pelé 24/10/2020